DISTRIKAN’I MAEVATANANA : Olona roa maty novonoin’ny dahalo ankoatra ireo omby voaroba
Mirongatra ny fanafihan-dahalo mahery vaika ao anatin’ny Distrikan’i Maevatanàna, Faritra Betsiboka. 21 avril 2017
Tao anatin’ny iray andro, Kaominina roa samy hafa mandrafitra ity farany no lasibatra izay samy namoizana ain’olona avokoa ankoatra ireo omby voaroba.
Mitetibety andro aman’alina ny mponina any an-toerana. Mahamay ny asan-dahalo ary tsy mitsitsy mihitsy ireo mpanao ratsy fa mahavita mamono amin’ny fomba feno habibiana. Tsy vitan’izay fa na amin’ny andro mazava be izao aza dia manao ny fandrobana ry zalahy. Jamà mpiandry tanàna iray no notetitetehin’ny malaso tamin’ny fibara tao Ambalarano ao anatin’ny Kaominina Tsararano. Afak’omaly maraina tokony ho tamin’ny 9 ora no nitrangan’io. Folo lahy no nanao fahirano ny tanàna niaraka tamin’ny basy kalachnickov. Nirefodrefotra ny basy tamin’izany, notetezin-dry zalahy avokoa ny vala izay nahazoan’izy ireo omby miisa 60.
Tsy nitazana fotsiny anefa fa niezaka nanohitra avy hatrany ireo Jamà. Raikitra ny fifandonana, iraikalahy tamin’ireo mpiandry tanàna no maty voatsindrona teo amin’ny fony ary mbola notetehin’ireo olon-dratsy ihany koa rehefa lavo tamin’ny tany. Tafavoaka ny tanàna ihany ireo dahalo, sahabo ho 10 minitra taorian’io vao nahazo antso ny Zandary. Nisy ny fanarahan-dia narahina fifandonana ka resy tosika ihany niafaran’ireo malaso. Tafaverina amin’ny tompony avokoa ny omby rehetra.
Ankoatra izay dia notafihana andian-dahalo nirongo basy ihany koa ny tanànan’i Betanatanana-Marosakoa, Kaominina Maria mbola ao anatin’ny Distrikan’i Maevatanàna hatrany. Tokony ho tamin’ny 1 ora antoandro no nahazo antso avy amin’ny Ben’ny tanàna tao an-toerana ny Zandary fa maty voatifitra ny lehilahy iray monina ao Betanatanana.
Araka ny fanazavany dia nisy andian-dahalo fito lahy nanafika ny tanàna. Nanao tifitra variraraka ireo olon-dratsy nandritra ny fanafihana ka tamin’io no nahafaty ilay raim-pianakaviana. Omby 27 no voaroba tamin’io, ka isan’ny lasibatra ny lehiben’ny Fokontany tao an-tanàna.
Nidina teny an-toerana ny Zandary niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna sy ny mpitsabo rehefa nahare ny vaovao. Hatreto mbola tsy nisy tratra ireo malaso. Mitohy ny fikarohana.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (327) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (150) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (112) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (92) 13 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (62) 14 janvier 2021 Nahazo ny anjarany mpanodina voankazo sy mpanarato FILOHA ANDRY RAJOELINA (57) 12 janvier 2021